Famerenana fohy momba ny GNOME 3.16 | Avy amin'ny Linux
Famerenana fohy momba ny GNOME 3.16
** GNOME ** dia iray amin'ireo tontolo birao tsara indrindra amin'ny GNU / Linux, ary noho izany dia iray amin'ireo malaza indrindra. Na dia tsy iray amin'ireo ankafiziko aza izany dia tsy mijanona ny fanekeko fa manana zavatra tsara be dia be izy io, nefa koa zavatra ratsy ary izany dia mihoatra izany na kely aza ity lahatsoratra ity.
Ny hevitra dia ny tsy hikorontana amin'ny GNOME. Tokony hanomboka amin'ny hevitra isika fa izay rehetra holazaiko etsy ambany dia ny hevitro manokana ary ny fitiavako tsy mitovy amin'ny an'ny ambiny. Ho hitantsika ny zavatra tsara, sy ny ratsy, manandrana ny tsy hanavakavaka araka izay tratra.
Manazava indray aho fa misy foana ny olona clueless: IZAY NY HEVITRAO IZAHO
Izaho dia nanandrana ** GNOME Shell ** somary bebe kokoa tato anatin'ny andro vitsivitsy, ary afaka mamantatra ny tsara sy ny ratsy ao aminy aho, na izany aza, mbola tsy mifanaraka amin'ny antenaiko ihany izany ary hiresaka momba an'io ato amin'ity lahatsoratra ity ihany koa aho.
Araka ny fantantsika, ** GNOME 3.16 ** dia nivoaka omaly nameno ny fon'ny mpankafy an'ity Desktop Environment ity tamina fanantenana sy faniriana. Ary inona no antony mahatonga ny tabataba rehetra? Eny, amin'ny hevitry ny maro, izay manao zavatra tsara ankehitriny, farafaharatsiny ny ankamaroan'izy ireo.
### Ireo zavatra ratsy momba ny GNOME 3.16.
Notsoriko fa ny ankamaroan'ny zavatra hoteneniko momba ny zavatra ratsy dia azo vahana na ovaina amin'ny alàlan'ny fanitarana, na izany aza, hiresaka momba ny GNOME Shell aho satria fantatry ny mpamolavola azy, amin'ny alàlan'ny default ary tsy misy fanampiny.
#### Ny interface windows
Tsy mpamorona interface tsara aho, fa tsy mila manam-pahaizana ianao vao hahatsapa fa ny bandy ao amin'ny GNOME dia nanandrana nanakaiky ny fijery sy ny fahatsapana ny OS X. Iza no manome tsiny azy ireo? Tsy izaho, satria na dia io aza no ho teboka ratsy voalohany, etsy ankilany dia zavatra tiako izany.
Mety mifanipaka izay lazaiko, ka hiezaka aho hanazava bebe kokoa ny momba ahy. Ny fisehon'ny rindranasa sy ny tontolon'ny Desktop amin'ny ankapobeny dia tiako, satria tena akaiky ny fomban'ny OS X.
GNOME Tsy ianao irery no nanandrana naka tahaka * na * nandika * ny * Apple * OS. Miaraka amin'ilay filozofia fakana tahaka an'i Unity ihany, ny hany zavatra banga dia ny mametraka ny Dock eo ankavia eo ambany, zavatra iray izay mizara ny endrika GNOME Shell, ary amin'ny tranga roa tonta dia tsy afaka esorina hiala ilay toerana izy ireo .
Saingy tsara, raha ny hitondra zava-bita amin'ny ** style ** kokoa no ampiasain'ny mpampiasa GNU / Linux, nahomby ihany izy ireo, na izany aza, indraindray ny famoahana kopia. Araka ny fantatsika rehetra, GNOME izao * dia manambatra ny bara lohateny sy ny bokotra fikandrana miaraka amin'ny menio fitaovana *, amin'ny fomba OS X marina, amin'ny zavatra antsoin'izy ireo hoe CSD. Ok, ary inona no fatiantoka entin'izany?
Vitsy ihany ny fahitana, fa ara-teknika raha maty ny fampiharana dia maty ny varavarankely ary noho izany dia tsy voafehintsika intsony. Tsy azontsika atao ny manidy azy, mampihena azy, na zavatra hafa toa izany. Ary izany dia maneho olana iray ho teboka ratsy? Mety ho izany, hoy aho, satria ny valin'izany dia miankina amin'ny ataontsika amin'ny fotoana ahantona ny varavarankely .. * (Mitandrema amin'ireo izay mahita pr0n misoloky ehh) * ..
#### Ilay fantsom-pifandraisana vaovao
Ny zavatra tsy tian'ny mpampiasa maro dia ny tsy avelan'ny GNOME hametraka ny rindranasa eo amin'ny zoro ambony ambony amin'ny efijery, izany hoe eo amin'ny faritra misy ny takelaka izay tokony haleha ny vata rafitra, saingy tonga amin'ity kinova 3.16 ity izy ireo miaraka amin'ny vahaolana: takelaka kely amin'ny ilany havia ambany * izay miseho mitsambikina * raha tsy misy ny rindranasa izay mampiasa ny fantsom-pifandraisana ary afaka miafina na mampiseho isika
Hatreto dia tsy ratsy ny hevitra, maninona no fenoy kisarisary ny tontonana ambony? Na izany aza, misy zavatra roa tsy tiako na hitako hoe tsy fahombiazako:
Any amin'ny ilany havia ambany no misy azy, rehefa ampifanarahintsika amin'ny sisiny ankavanana ny fitoeran-drakitra, tsy maninona na miakatra na midina izy fa eo ankavanana. Ity dia mety tsy mahazo aina amin'ny sasany (tafiditra ao amiko).
Raha manafina azy isika ary ny fampiharana izay ahena dia tsy mifanaraka amin'ny rafitra * fampandrenesana vaovao * dia tsy hahita na inona na inona isika. Ho an'ny sasany dia mety ho tsara izany, ho ahy dia tena ratsy tokoa, satria ny rindranasa izay entiko amin'ny * tray * dia ireo izay mila misy hampandre ahy sy ho amin'ny toerana hita maso.
#### Mbola tsy manana bara ho an'ny lahasa izahay.
Raha te hanova ny varavarankely isika na mahita fotsiny fa misokatra isika, inona no tokony hataontsika? Amin'ny ankapobeny, ny GNOME dia tsy mampiditra ny bokotra Maximize / Minimize ao anaty varavarankely, satria mety hihevitra ireo mpamorona azy fa tianay ny hisokatra ny varavarankely rehetra, ny iray eo ambanin'ny iray hafa na ny eo amin'ny birao fitokana-monina.
Na izany aza ny fahitana ireo fisokafana misokatra dia manana safidy 3 izahay raha ny fahalalako azy:
+ Mandehana miaraka amin'ny bokotra totozy eo amin'ny ankavia havia mba hampisehoana ny * dashboard *.
+ Ataovy toy izany koa fa manindry ny lakile Super L (ilay misy saina Windows).
+ Na mifamadika amin'ny fampiharana ampiasana Alt + Tab.
Raha mahita an'ireto safidy telo azo ampiharina na ahazoana aina ireto ianao ok, fa amiko dia toa tsy azo idirana na azo ampiasaina mihitsy izany.
#### Fampandrenesana mangina
Ny iray amin'ireo zava-bita tsara amin'ity kinova 3.16 ity dia ny fampandrenesana izay mankany an-tampony ankehitriny miaraka amin'ny famantaranandro. Hiresaka momba ireo aho avy eo, izao dia hiresaka momba ny fampandrenesana momba ny hetsika sasany izay niasa tao amin'ny GNOME 3.14 ary ankehitriny dia tsy mandeha izany.
Ohatra iray amin'izy ireo ny rehefa mampifandray fitaovana ivelany isika, ohatra ny fahatsiarovana USB. Inona no mitranga, nisy nahita ve fa nitendry port USB izahay? TSIA, raha tsy mijery ireo teboka boribory kely miseho eo akaikin'ny famantaranandro isika dia tsy ho hitantsika izany.
Na dia ireo safidiko fampandrenesana aza dia hitako ny safidy mamela ahy hanisy fitaovana azo esorina ho anisan'ny fampandrenesana (mamela ny famoahana). Ary ankehitriny, raha misy olona tsara fanahy be dia be, azonao atao ve ny milaza amiko ny fomba hanonganana ilay fitaovana azo esorina rehefa tafapetraka nefa tsy mila manokatra ** Nautilus **? Tsy misy safidy amin'izany na aiza na aiza.
#### Apps tsy misy safidy
Azafady, na iza na iza tonga amin'ilay lahateny taloha izay tsy mila ataonao intsony fa mizaha, maka tahaka ny sarimihetsika ary mandamina antontan-taratasy, ary ny fahatsoran'ny GNOME mamela anao hanao izany, dia afaka mamonjy ny tenanao amin'ny olana amin'ny fanoratanao ny hevitrao. Ary lazaiko amin'ny fanajana fa ny tantara dia mihoatra ny taloha.
[quote] Betsaka ny mitsikera ny KDE satria be loatra ny safidiny, ary manontany tena aho hoe iza amin'ireo no ho tsara kokoa: ny manana safidy tsy ampiasaintsika, fa alaivo izy ireo rehefa mila azy ireo, na tsy manana azy ireo mihitsy, na rehefa mila azy ireo isika? [/ quote]
Izay fotsiny no mahazo ahy amin'ny GNOME sy ny fampiharana azy. Nautilus Ny mahantra dia manao kely kokoa isan'andro, tsy ho ela dia hanana safidy vitsy kokoa noho ny Thunar y PCManFM, raha mbola tsy nahatratra an'io fotoana io. Ohatra, manandrama manonona anarana rakitra maromaro amin'ny fotoana iray. Ary tsy mamela ahy hahita ny haben'ny fisie raha tsy mila mandeha any amin'ny tranony na misafidy azy aho, ohatra fotsiny ny mametraka ohatra roa. azon'ny gedit Iray hafa izay ara-drariny, saingy hey, somary misy fanasongadinana loko ho an'ny fiteny samihafa.
Ny kalandrie GNOME tena tsara tarehy vaovao, amin'ny fomban'ny Maya ny kalandrie an'ny ElementaryOS, fa ny fitantanana ny hetsika ataontsika mifanohitra amin'izay hita (tokony ho tsotra be), mety ho aretin'andoha. Manasa anao aho hanao fitsapana, hamorona hetsika ho an'ny anio, ary io hetsika io ihany dia andramo ampitaina rahampitso, amin'ny fanintomana azy fotsiny. Tsy afaka izy ireo, tsy maintsy mamorona vaovao izy ireo, mametraka ny mitovy amin'ilay taloha ary mamafa ny taloha.
Ary afaka nanohy ihany aho, fa mba hamaranana ity fizarana ity dia manana ny ** GNOME Control Center ** isika, izay tsy tsotra loatra amin'ny tranga sasany, fa mba hahazoana ny safidy sasany dia tsy maintsy tsindrio bebe kokoa noho ny Windows.
#### Mila miresaka momba ny safidy fanamorana ve isika?
Raha tsy misy * Gnome Tweak Tools * izay hanaparitahana azy dia tsy ampidirina amin'ny alàlan'ny default, hanana asa sarotra be izahay miaraka amin'ny * DConf / Gconf-Editor * mialoha hanovana, ohatra, ny endri-tsoratra. Teboka iray izay hokianiko foana ao amin'ny GNOME vaovao.
#### pitsopitsony hafa
Ny application na ny mpandefa baiko ( Alt + F2 ) dia tsy manana fahavitan-tena mandeha ho azy, noho izany dia mila fantarintsika ny tena anaran'ilay rindranasa tiana hatsangana.
### Ireo zavatra tsara momba ny GNOME 3.16
Saingy tsy ny zavatra rehetra no ratsy, tsy maintsy lazaina. Averiko ihany fa ny iray amin'ireo zavatra mahaliana indrindra momba ny GNOME Shell 3.16 dia ny mpampifanaraka azy ary ny fomba tsotra dia hay. Amin'ny ankapobeny, ary amin'ny ankapobeny, izy dia tontolo iainana Desktop tsara tarehy ao anatiny izay mifanaraka aminy ary misy zavatra vitsivitsy izay tsy dia mahaliana loatra.
#### boaty na boaty GNOME
Famaranana ho an'ny Qemu-kvm izay mendrika mendrika deraina fotsiny. Misy zavatra tsara dinihina fa tsy mbola nisy nieritreritra ny hampiditra fitaovana tsotra toy izany hananganana virtoaly teo aloha. Amin'ity kinova ity dia tsotra kokoa ampiasaina sy mahafinaritra kokoa.
#### Fampandrenesana mifandraika
Zavatra tiako foana momba ny GNOME Shell, ny fahefana ohatra mamaly hafatra manokana avy amin'i jabber avy amin'ilay fampandrenesana mihitsy.
Tsy ratsy ireo fampandrenesana vaovao, fa ny tsy fahafahantsika misafidy izay tiantsika hajanona na akatona dia mahatonga ahy tsy mahazo aina, misy aza manjavona tsy misy maniry, na mikatona izy ireo ary tsy azo esorina (indrindra amin'ny an'i Empathy, izay manaraka manana bibikely), fa voavela heloka ianao. Mangatsiaka be izy ireo ary miorina amin'ny toerana tsara, mibodo toerana iray izay tsy nampiasaina teo aloha.
#### efijery hidin-trano
Na kopian'ny Windows io na tsia, tsara tarehy ny efijery fanidiana GDM, ary vao mainka aza rehefa manana fampandrenesana isika ary afaka mahita azy ireo nefa tsy miditra amin'ny birao, na dia ampahany aza izany dia mety maneho olana lehibe ho an'ny tsiambaratelon'ireo mpampiasa.
#### Screencast eo an-tànana
Safidy iray hafa izay tiako foana momba ny GNOME Shell ny fahafahana mandray an-tsoratra ny birao misy fitambarana fanalahidy tsotra: Alt + Ctrl + fanovana + R.
Raha tsy misy azy ireo dia misalasala be aho fa misy afaka miaina mihoatra ny herinandro ao amin'ny GNOME Shell, raha tsy hoe tsy mitaky be loatra izy ireo. Ny hany lesoka dia izao dia maro amin'ireo miasa amin'ny GNOME 3.14 no efa kilemaina ao amin'ny GNOME 3.16. Saingy tsy isalasalana fa zavatra tsara tsy maintsy tononina ireo.
### Fehiny momba ny GNOME 3.16
Ho an'ireo izay tia ny fahatsorana sy ny fahatsorana, dia tsy isalasalana fa hahita ilay tontolo Desktop mety tsara ao amin'ny GNOME izy ireo. Ny fampiharana toa ny mpanjifa IRC vaovao, ny sarintany, ny kalandrie, avy amin'ny austerity dia fantany tsara, madio.
Tiako ny fampiharana marobe toa ny toetr'andro, izay tena vita tsara. Na izany aza, amin'ny faran'ny andro dia hitanao fa manana ny ampy fotsiny ianao afaka miasa ary tsy afaka mamintina tanteraka ny Desktop.
Misy ny hafa izay tsy azoko notsapaina toa ny Mozika, satria nisy hadisoana nomeny ahy rehefa nanandrana nandefa azy ireo tamin'i Python na zavatra toy izany, ary ny Empathy, tsy afaka nanokatra varavarankely fifampiresahana tamin'ny namako mihitsy aho. Heveriko fa misy ihany koa ny tsy fitoviana eo amin'ny famolavolana (izay mazava fa kendrena amin'ny takelaka), satria na dia mahita bokotra goavambe aza isika eo am-baravarankely, dia tery tokoa ireo bara horonana.
Saingy amin'ny ankapobeny, isaky ny famoahana GNOME dia lasa mifantoka bebe kokoa amin'ny tanjon'izy ireo ary manome vokatra mahomby kokoa izy ireo. Ny tsy tiako, ny tsy hitako mamokatra, ny fankasitrahako fotsiny, fantatro fa mahazo aina ireo mpampiasa maro. Mety misy tombony hafa izay mbola tsy nampiasako na tsy fantatro, ho hitako isan'andro isan'andro izy ireo, na izany aza dia maheno soso-kevitra sy mason-tsivana amin'ireo hevitra aho
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Famerenana fohy momba ny GNOME 3.16
70 hevitra, avelao ny anao
ivanbarram dia hoy izy:
Ny hevitra voalaza ao amin'ity bilaogy ity dia anjaran'ilay olona mamoaka azy ireo ary tsy voatery hisolo tena ny desdelimux.net
daryo dia hoy izy:
ny hevitro dia ny gnome dia nataon'ireo mpamorona sary mamela ny solosaina
Mamaly an'i daryo
lfelipe dia hoy izy:
Toa marina amiko fa ny gnome dia tsy manana bara fizahana, super vakano ny mitondra ny tendron'ny totozy ary mahita ny varavarankeliko ara-potoana.
Valio i lfelipe
Azontsika atao ihany koa ny manao izany amin'ny KDE, ohatra, ary mbola manana ny bara fiasa 😉
Ny tiako holazaina dia hoe tiako ny GNOME, efa nandramako daholo ny tsiro akorandriaka ary tsy misy manaisotra ny tsiro sy ny fankafizan'ny tetikasa toa izao.
Pejy tena tsara.
Mazava fa tsy natao ho antsika izay mitantana antontan-taratasy maromaro amin'ny fotoana iray. Midika izany fa ny fihetsika izay atolotry ny GNOME voajanahary dia tsy dia mahomby amin'ny fikirakirana antontan-taratasy maro indray mandeha.
Mahatsiaro ho mpanamory sambon-danitra any limbo aho mitady ny sambon-tranony raha tsy hitako ny biraon'ny lahasa.
kapila tanimanga dia hoy izy:
Mahafatifaty i Gnome, tiako foana izy io, saingy ny hevitra fanaovana zavatra bebe kokoa ary kely kokoa isaky ny mandeha, toa tsy mitombina amiko indraindray, manantena aho fa tsy hiafara amin'ny OperaCoast (mihetsika mifototra amin'ny fihetsika sy ny bokotra fanalahidy)
Mamaly an'i Tile
rhoconlinux dia hoy izy:
Sa ilay OSX Yosemite no naka tahaka an'i TODOOOOOO avy any Gnome ??? !!! ^ _ ^
Mamaly an'i rhoconlinux
Mety ho hehehe ihany koa.
Tena marina ny nataonao fa ny fikandrana dia kopian'ny osx ho gnome fa tsy ny mifanohitra amin'izay, raha tsy mijery ny daty famoahana
Chuck daniels dia hoy izy:
Tsy mifanaraka amin'ny hevitra sasany amin'ny maha mpampiasa Gnome Shell mahazatra ahy aho, fa mendri-kaja izy ireo. Raha ny fahitako azy dia mino aho fa ny filozofia amin'ity birao ity dia ny manome ny fototra sy ilaina hahafahana miasa, ary raha tianao ny hanitatra azy dia mety ho mora amin'ny fanitarana (izay azo apetraka mivantana miaraka amin'ny tsindry iray avy amin'ny pejy mifandraika).
Ho teboka fanamarihana, ny kalandrie dia rindrambaiko vaovao izay ao anatin'ny dingan'ny fitsapana, karazana topi-maso mialoha, ary havoaka definitively amin'ny kinova 3.18 of Shell. Nanampy iray hafa ho an'ny Ebooks koa izy ireo.
Famerenana tsara sy lahatsoratra tsara, tohizo. 😉
Valiny tamin'i Chuck Daniels
Misaotra ny hevitra Chuck Daniels. Raha ny marina dia miombon-kevitra amin'ny zavatra arosonao aho, ary mazava ho azy, zonao ny manana ny hevitrao manokana. Samy hafa ny mpampiasa rehetra ary samy hafa ny filany. Angamba efa nifanaraka tamin'ny zavatra sasany tsy natolotr'i GNOME ahy aho.
Manaiky aho, na dia hiovaova aza ny foto-kevitry ny Miasa. Amin'ny maha mpisolovava ahy dia mila manana antontan-taratasy misokatra miaraka amin'izay aho ary hamakivaky azy ireo mora foana. Na ny rafitra Unity aza dia tsy mahazo aina amiko amin'ireto tranga ireto. Mbola bebe kokoa aza raha tsy maintsy mandeha any amin'ny activités aho na manambatra lakile; na raha mila ajanoko kely ny windows. Mazava ho azy, ity no fotokevitra omen'ny GNOME ivelan'ny boaty.
Ny zavatra momba ny fanitarana dia tena tsara fa ... efa voavaha ve ny olan'ny tsy fitoviana fitehirizam-boky sy API?
ZombieAlive dia hoy izy:
Eny, fa ny olona ao amin'ny akorandriaka Gnome dia tsy mampiditra zavatra marobe izay mahazatra ary misy ny hafa tsy vitan'ny hoe tsy manana safidy nefa tsy dia mahay zavatra, zavatra fototra toy ny fanovana ny valiha na endrika ivelany. GNOME Tweak Tool dia fampiharana tsy ilaina satria ny endriny dia tsy maintsy manana ny foibe fanaraha-maso gnome. Ary ny zavatra hafa dia ny ivontoerana fanaraha-maso gnome dia voafetra mihoatra ny ilaina. Ary zavatra maro hafa izay tsy fehezin'ny mpampiasa. Akorandriaka gnome amin'ny botika Fedora manomboka amin'ny 600 megabytes ka hatramin'ny 1gb ram amin'ny masinina 4gig ary tsy misy fomba hamahana izany. Birao iray izay efa an-taonany maro tamin'ny beta izy io, tsy tafiditra ao anaty efijery gnome-screen-saver na gnome-session-propities na safidy maro hafa toa ny betas.
Mamaly an'i ZombieAlive
tranga tsy fahita firy dia hoy izy:
Marina ny anao; Ireo mpamorona gnome dia manolotra tontolo iainana ifotony anao miaraka amin'ny mety hanitarana azy amin'ny fiasa, izay mahomby kokoa. Na dia tsy mifantoka amin'ny fanomezana tontolo iainana maivana amin'ny safidy aza izy ireo. Satria tsy ho minimalist intsony izy io. Saingy tsy manaisotra ny mety hiseho kanto sy maoderina izany. Amin'ny alàlan'ny default, mahafinaritra ny maso izany ary azo hatsaraina amin'ny lohahevitra GTK sy Shell isan-karazany, izay tsy vitsy.
Angamba ny fomban-javatra manokana dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fifidianana ny tontolon'ny birao. Satria manana PC aho dia mampiasa Linux ary tsy nampiasa Windows na Mac nandritra ny fotoana maharitra.
Mamaly ny tranga tsy fahita firy
Voalaza hatrany fa fankahalana ny fampitahana. Ary ity dia mety ho ohatra. Mety ho kde no azo ampiharina kokoa, fa mavesatra sy Gnome-Shell, maivana ary haingana kokoa. Miaraka amin'ny tanjany sy ny fahalemeny dia samy manan-kery ireo birao roa, raha ny fiheverako ny fanetren-tena.
Efa nolazainao tany am-piandohana dia ny hevitrao manokana.
Tsy te hiditra fampitahana aho, fa ny milaza izao fa ny KDE dia mavesatra noho ny GNOME, na miadana kokoa, dia mety ho fahadisoana mitovy amin'ny haben'ny Masoandro. Na dia mazava ho azy aza, tokony ho hitantsika ilay antsoinao hoe "mavesatra" amin'ity tranga ity .
Tsy nilaza mihitsy aho hoe tsy mitombina ny GNOME, hoy aho (amin'ny teny hafa) fa tsy mahavaha ahy izany, fa tsy mitovy izany. GNOME dia tontolon'ny Desktop tsara, saingy tsy ho ahy.
Spacejock dia hoy izy:
Efa nolazaiko hoe, KDE miaraka amin'i Konqueror amin'ny 1.2 GB.
Gnome miaraka amin'ny antsasaky ny Firefox.
Mamaly an'i Spacejock
Od_air dia hoy izy:
Araka ny nolazain'i Diazepan indray mandeha: "Samy mavesatra tanteraka sy tanteraka tanteraka izy roa."
Mamaly an'i Od_air
Tao amin'ny KDE niaraka tamin'i Fedora dia nanomboka 800mb farafahakeliny aho niaraka tamin'ny mpandefa homerun izay nihinana 250mb fotsiny ary tao amin'ilay distro iray ihany fa niaraka tamin'ny akorandriaka na kanelina dia hanomboka ahy ny birao raha toa ka raha eo amin'ny 1200mb farafahakeliny manodidina ny 900mb nefa tsy manana fotoana hampihena ny loharano ny tontolo iainana. Manana sary 4-core CPU sy 1gb Nvidia aho ary 4 RAM heveriko fa tsy mendrika hanaovana fampisehoana ratsy amin'ireto loharano ireto ao amin'ny gnomehell na any Cinnamon.
ka ny varavarankely "Ataovy toy izany fa ny fanindriana ny bokotra Super L (ilay misy saina Windows) dia hiseho." Toa tsara amiko izany, satria manana ny zava-drehetra miaraka amin'ny fanalahidy Win aho, ary ny zava-drehetra amin'ny alàlan'ny keyboard ary tsy mila mandeha na aiza na aiza amin'ny totozy aho. Aorian'ny Win Key dia hitako eo amin'ny tena izy ny varavarankeliko, ary koa raha te hanokatra zavatra aho dia manorata kely fotsiny dia izay ... tiako be izany.
Mazava ho azy, tiako ny mihena kely sns…. (izay ovako amin'ny fitaovana fanahafana)
"Tsy azonao apetahina amin'ny farany ambany ny birao" ... inona izany raha ny manery ny faran'ny birao? Miarahaba sy misaotra!
sausl dia hoy izy:
Mihalehibe kokoa ny hatsaran-tarehy nefa lavitra ny birao birao nentim-paharazana tena natao ho an'ny efijery mikasika dia misy fanitarana izay manampy nefa somary tsy raharahiana
Aleoko ny kanelina na dia samy ratsy aza ny eo amin'ny PC-ko .-.
izany no mahatonga ahy hijanona miaraka amin'i kde
Valio amin'i sausl
Tazomy ny KDE taloha, tsy misy zavatra hafa manadino ... hahahaha
Voasarimakirana be ny kanelina tato ho ato, birao miasa tokoa, mihoatra noho i Gnome aza, na dia herinandro vitsivitsy lasa izay aza dia nametraka an'i Mint tamina zanak'olo-mpiray tam-po amiko aho ary ny marina dia hitako fa "mavesatra" ... Farany dia Vita tamin'ny KDE, mazava ho azy fa feno fankasitrahana avy amin'ny Windows izy ... ratsy loatra fa rehefa afaka 5 andro dia tsy fantatra ny birao noho ny asa-tanana be dia be napetrany tao, tsy lazaina intsony ireo loko nofidiany ho personalize: facepalm: ho an'ny tsiro , loko.
gnome na kde…. bitches fitsipika fitsipika openbox 😛
Tiako foana ny sasany wm, tsy hoe satria violet ny PC-ko na tsy mahery vaika loatra, afaka mihazakazaka kde tsy misy olana aho fa tiako ny fahatsorana, manana menio hanokafana rindranasa aho, ny fotoana, ny fitoeran-drakitra ary ny bara fizahana efa vitako , na izany na tsy izany, raha mila birao aho dia mankany xfce
Ho ahy dia ny solosaina misy karatra efa vita karama ...
Ireo olona mampiasa Gnome, KDE, WM, dia sooooo mainstream ...
ufn dia hoy izy:
Ny famakiana fotsiny ny lahatsoratra dia hamela ahy ny faniriana hipotetika mety hananako indray andro any hanandrana biby goavambe toy izao. Rehefa te hahita zavatra tsara tarehy aho fa tsy hanomboka an'i Debian dia manomboka ny Windows Vista miaraka amin'i Aero sy ireo chirimbolos rehetra aho ary averiko indray ilay fomba fijery. Ary raha te-hanao ny zavatra hafa rehetra aho, dia Debian miaraka amin'ny Mate Desktop. Ny fanovana ny fanovana irery, tsy misy tanjona mazava, tsy ilaina, tsy mamaha olana fa mitondra aretin'andoha isan-karazany, maninona ... Raha eo amin'ny ankavanana ny fanaraha-maso, inona no azo omena amin'ny fanovana azy ireo amin'ny ilany hafa? Fa maninona no mandao izay mandeha? Raiso ny ohatra an'ny Windows 8 sy ny interface Metro na Modern azy ... tsy malaza io, tsy ilaina amin'ny fiasana amin'ny birao ary tsy maintsy niverina haingana tamin'ny menio fanombohana izy ireo. Hanohy ny Debianako miaraka amin'ny Mate Desktop aho avy eo, mitovy amin'ny bika aman'endriny fa tsara kokoa noho ny Gnome taloha. Mandeha amin'ny toerana tokony alehany ny zava-drehetra, mandeha daholo ny zavatra, afaka miasa izy. "Raha mandeha izy dia aza amboary"
Mamaly an'i ufn
Dylan dia hoy izy:
Hahaha tsia, ny bokotra fikandrana dia eo ankavanana toy ny mahazatra. Ataoko fa nanova azy ireo miankavia i elav noho ny antony sasany.
Valiny tamin'i Dylan
Jairo dia hoy izy:
Miombon-kevitra aminao aho saika amin'ny zavatra rehetra. Tsy azo lavina fa birao tena tsara izy io ary toa mahavariana ny fampiharana sasany, toy ny toetrandro sy ny sarintany, saingy tsy dia mandaitra loatra ny fiasa. Tsy misy zavatra mahomby holazaiko. Fa maninona izy ireo no manizingizina ny hampiasan'ny mpampiasa ny rafitra araka ny eritreritr'izy ireo fa tokony handeha? Ny DE hafa rehetra dia manome antsika ny fahafaha-mampifanaraka izany amin'ny zavatra tiantsika sy ilaintsika. Raha ny ahy dia tsy mitovy amin'ny fomba niavian'io orinasa io ny KDE ahy satria ampifanarahiko amin'ny filako izany.
Mamaly an'i Jairo
“GNOME dia iray amin'ireo tontolo birao tsara indrindra amin'ny GNU / Linux, ary noho izany dia iray amin'ireo malaza indrindra. Na dia tsy iray amin'ireo ankafiziko »aza ny nanombohanay ratsy ny lahatsoratra, tsy iray amin'ireo tsara indrindra i Gnome, iray amin'ireo malaza indrindra. Ny latabatra tsara indrindra dia ilay nofidin'ny tsirairay, izay malaza kokoa dia tsy mitovy dika amin'ny tsara kokoa.
Raha tsara kokoa na malaza kokoa dia ampahany amin'ny fankasitrahana ny tsirairay fotsiny, tsy noho izany antony izany dia manomboka ratsy ny lahatsoratra. Na izany aza, raha ho ahy iray amin'ny tsara indrindra izy io, raha ny tena izy, ho ahy dia tsy misy afa-tsy ROA TSARA TSARA, KDE sy GNOME, ny hafa dia tsy mampiasa afa-tsy fampiharana avy amin'ireo roa ireo.
developer.js dia hoy izy:
Raha tsy diso aho dia tonga ny Gnome Shell Client Side Decorations herintaona talohan'ny CDE an'ny OSX. Ka ny OSX no aingam-panahy avy amin'i Gnome Shell fa tsy ny mifanohitra amin'izay. Mikaroha tsaratsara kokoa ...
Valiny amin'ny developer.js
Que? Angamba ny voambolana CDE dia tonga voalohany tao amin'ny GNOME, saingy efa ela ny OS X, saingy fotoana fohy, io tsanganana lohateny io miaraka amina fampidirana boaty. Na izany na tsy izany, raha manana loharano ahafahanao miady hevitra tsara momba ny hevitrao ianao dia aza andefasana izany.
Tsy haiko raha mendrika izany:
Misy rohy mankany amin'ny lahatsoratra iray tamin'ny 2011 izay nahitana fa io fanovana io dia nomanina nanomboka tamin'io taona io.
Nijery ihany koa aho ary toa ankafiziko io fampiasa io ao amin'ny OS X Yosemite, ny kinova taloha tamin'ity OS ity dia Mavericks ary raha ny fahitako azy dia mbola tsy nampiharina izy ireo. Araka ny nivoahan'ny OS X tamin'ny 2014, sa tsia? Ary ny Gnnome Shell 3.10 dia nivoaka tamin'ny 2013, tao anatin'io kinova io dia natolotra ny CSD. Ka raha tsy diso aho dia ny Gnome no nametraka azy voalohany ary ny OS X no nampiasa azy taty aoriana. Mazava ho azy fa ny datin'ny bilaogy sy ny sary fotsiny no notadiaviko hiteny an'io, tsy fantatro tsara ny tantaran'izy roa ireo. Mety diso aho, raha izany, ahitsiho aho.
Raha ny elav, CSD fa tsy CDE (Client Side Decorations hoy ny developer.js)
Andeha hojerentsika, mety naka tahaka ny famolavolana Epiphany izy ireo araka ny voalazan'ny lahatsoratra MuyLinux, angamba tsia, na izany aza, ny fananana ny bokotra Close / Minimize / Maximize amin'ny haavon'ny baraovana dia zavatra iray raha tsy diso aho dia efa ela no nisy azy. fotoana amin'ny OS X (na dia tsy ny fampiharana aza). Na izany na tsy izany, tsy maninona raha nampiditra azy ny GNOME tamin'ny 2011, tonga tamin'ny fampiharana azy tamin'ny 2014/2015 .. noho izany, ilay voalohany mikapoka, mikapoka indroa .. 😀
Efa nahitsiko ny CSD, diso foana aho ary nametraka CDE, izay azoko avy eto, noho izany ny fisavoritahana.
Mpisolovava an'i Devoly dia hoy izy:
Mieritreritra aho fa ny hevitra ao ambadik'ity birao ity dia very hevitra. KDE dia hanana safidy maro, fa maninona no tadiavintsika izy rehetra hametraka sy handray ny habaka kapila, miaraka amin'ireo tranomboky rehetra mifandraika amin'izany, raha 20% fotsiny no hampiasaintsika?
Gnome dia faran'izay kely indrindra, hany ka tsy afaka mampiasa fitaovana maro isika. Fa izany indrindra no ilan'ny extensions, handraisana ny birao amin'ny fampiasana tiantsika omena azy.
Toa ahy fa ny fomba GNOME dia misy dikany bebe kokoa, ny hany zavatra mitranga dia ny fanatanterahana azy ratsy, satria isaky ny kinova vaovao dia tsy mandeha intsony ny fanitarana taloha.
Raha voavaha io olana mifanentana io dia azonao atao ny mametraka izay ilaina amin'ny fomba fiasanao, izay miteraka birao maivana sy maodely tena izy, namboarina tamin'ny fampiasana izay homenao azy, fa tsy ny habetsahan'ny mololo tsy misy ilana azy Manana ary mila mitelina miaraka aminy i KDE na mampiasa azy ianao na tsia.
Valiny amin'ny Advocate an'ny Devoly
Eny, fa satria rindrambaiko maimaim-poana izany ary ny ampahany tsirairay dia ataon'ny olona iza ary rehefa tadiavin'izy ireo, ny fomba KDE dia tsara kokoa satria rehefa milamina miaraka amin'ny rafitra ny zava-drehetra, rehefa esoriny dia azonao antoka fa efa notsapain'izy ireo daholo na ny ankamaroany . Raha miaraka amin'i Gnome izy ireo, rehefa avoakan'izy ireo amin'ny beta hahitanao bibikely, satria tsy mampiasa fanitarana maro ireo mpanandrana ary tsy mahita izany mazava ao anaty menus, dia tavela tsy miasa akory ao amin'ilay kinova vaovao.
Salama John. Ny tena marina, ny rafitra mampihatra ireo fanitarana dia loza, saingy tsy midika izany fa io hevitra momba ny maotina io, ny fanitarana ny birao miaraka amin'ny fanitarana dia ratsy.
Toa tsara kokoa amiko io noho ilay KDE, izay miaraka daholo, na hampiasainao na tsia. Manome ohatra iray aho ... Baloo, betsaka ny olona tsy te hampiasa azy io satria mandany loharano maro na noho izy ireo mieritreritra fa manimba ny fiainany manokana izany.
Tsy aleo ve manana safidy hametraka na manaisotra azy amin'ny tsindry iray, ho toy ny fanitarana?
Heveriko fa ny olana amin'ireo fanitarana dia misy ifandraisany amin'ny fisian'izany rindrambaiko maimaimpoana izany, heveriko fa noho ny tsy fahaiza-mandamina na tsy afaka nanatrika azy tsara.
Alohan'ny hamoahana kinova vaovao dia i Gnome no tokony hampifanaraka ireo fanitarana taloha mba hiasan'izy ireo tsara, ho an'ny zavatra iray ao amin'ny pejy ofisialy, heveriko fa raha tsy izy ireo dia noho ny tsy fahampian'ny loharanon-karena.
Ny tiako asongadina ao amin'ilay hevitra dia ny KDE sy Gnome dia foto-kevitra birao roa samy hafa tokoa, ka amiko dia tsy mifanaraka amin'ny toerany ilay fampitahana.
Toy ny mampitaha ny lxde amin'ny kde izy ireo, hevitra roa mifanohitra izay mitady tanjona tena samy hafa izy ireo. Tsy hitako ny hevitra lazaina, kde manana an'io fampiasa io ary ny gnome dia tsy, eny, eny, tsy izany, ka ahoana? izany ve dia tena ilaina ho anao fa tsy ampiasaiko mihintsy, ka ...
Ny baloo dia azo kilemaina amin'ny alàlan'ny tsindry bokotra Check But😉
fistro dia hoy izy:
Marina izany, KDE miaraka amin'ireo habaka kapila rehetra ireo .. satria efa mafy loatra ny kapila ankehitriny!
Ny fanitarana gnome dia korontana, satria satria miankina amin'ny iray izay tsy manavao ny tsimbadika iray mankany amin'ny iray hafa, dia mila miandry na manorona ny tananao ianao ary mianatra ny fomba hampandehanana azy ...
Mamaly an'i fistro
Salama Fistro, tsy fanontaniana momba ny habaka anananao ao anaty kapila io, fa fanontaniana ny fanananao azy io amin'izay ampiasainao na tianao hampiasaina. Ohatra, ao amin'ilay habaka nohazonin'ny safidy kde izay tsy hampiasaiko mihitsy, aleoko manana ny trilogy starwars, tompon'ny peratra, ny hobbit ary ny matrix ohatra. Araka ny hitanao, dia tsy resaka hafa ankoatr'izay.
Momba ny fanitarana, miombon-kevitra tanteraka aminao aho.
Eugene dia hoy izy:
Voalohany dia miarahaba anao aho amin'ilay lahatsoratra, ny zavatra rehetra mifandraika amin'ny Gnome dia manintona ahy. Izaho dia manana Ubuntu Gnome 14.04 napetraka miaraka amin'ny tontolo Gnome 3.10.4. Ny fanontaniako dia raha rehefa manavao ny kinova Gnome aho dia very fitoniana na ny fanekena ireo lakilen'ny fiasako kahie ...
Misaotra anao indrindra!
Valiny tamin'i Eugenio
Mijanona ao amin'ny GNOME mandritra ny fiainana aho….
Tsara ho anao 😉 http://goo.gl/2DwEhQ
elav mahafatifaty ny lohahevitra plasma an'ny pikantsary. Azonao lazaina amiko ve ilay anarana? Miarahaba 😀
AIR izany, fa ny kisary tray dia avy amin'ny lohahevitra Plasma antsoina hoe KDE5.
Snow dia hoy izy:
ny faharoa lazain'ny mpampiasa Plasma (kde) momba ny GNOME dia toy ny hoe mametraka mpanavakavaka eo alohan'ny lehilahy mainty hoditra ianao ...,
fahatelo: mihevitra ny GNOME ho toy ny Firefox aho ho mpizaha tena feno izay ampidirinao ny fanitarana hanatsarana ny fampiasana azy ary hataonao manokana kokoa, toa ny GNOME sa azonao atao an-tsaina ve ny firefox izay ahitana ireo fanitarana rehetra mitovy amin'ilay Plasma (kde)? , Mandeha amin'ny safidy voalohany aho ..
fahefatra: rafitra iray mandany anao na dia ramg 1g aza ary ao anaty kinova farany feno bibikely, heveriko fa tsy tokony hantsoina hoe tsara indrindra ...
Mamaly an'i Snow
Tsy haiko izay momba an'io fanehoan-kevitra io, na izany aza valiako ianao:
Faharoa: Miaraka amin'ny GNOME na ny tontolon'ny birao rehetra dia tsy nanavakavaka foana aho. Haiko ny mamantatra ny tsara sy ny ratsy amin'ny tsirairay.
Fahatelo: tsy mihatra amin'nity tranga ity ny fampitahana, satria tsy hoe Firefox dia manana extensions maro napetraka, fa ny Firefox dia azo namboarina hatramin'ny fametrahana ny bara URL eo ambany, ny bokotra fitetezana eo ankavanana, ny takelaka amin'ny ankavia, izay tsy tokony hampiasaina ny fanitarana, fa ho zanatany amin'ilay fampiharana.
Fahefatra: heveriko fa ny tianao holazaina dia ny KDE 5. Eny, amin'izao fotoana izao dia manana GNOME Shell napetraka ao amin'ny solo-saiko miasa (miaraka amin'ny RAM 8GB), ary ny KDE 4 ao amin'ny Laptop-ko (miaraka amin'ny 6GB RAM), ary tsara kokoa ny fahombiazan'ny KDE , toy ny fihinanana amin'ny fisokafana mitovy amin'ireo fampiharana ihany, miteny hoe: Chromium, Keepassx, Dolphin / Nautilus, Synergy, Konsole / Gnome Terminal ..
Lojika fa mbola manana ny hadisoany ny KDE 5, fampandrosoana vaovao tanteraka izy io, saingy tsy manana izany ve ny GNOME?
Raha fintinina, Snow, adihevitra tsy mitombina izay ezahinao hatomboka.
Miarahaba anao ary misaotra anao naneho hevitra.
1 - Ho an'ny mpampiasa KDE milaza fa tsy tiany ny Gnome, dia toy ny akoho akoho tezitra ary mibedy ganagana noho izy tsy nihira ny maraina.
2 - Mahatsiaro hafahafa aho rehefa mamaky ireto lahatsoratra ireto izay nilazan'izy ireo fa tsy mandeha tsy misy fanitarana ny Gnome ary hitako fa mampiasa azy io tsy misy fanitarana ary saika tsy misy lohahevitra. XD
didaz dia hoy izy:
Mamaly an'i didaz
Manaiky izany koa aho. Tsy fantatry ny olona ny fomba fiasan'ny birao, sy ny filazany fa ny tontolo iainana toa ny GNOME dia tsy mandeha raha tsy misy fanitarana, tsy mamokatra, sns ..., dia mitovy dika amin'ny tsy fahalalana sy tsy fahalalana, miaraka amin'ny fanajana feno. Betsaka, maro amintsika no mampiasa GNOME 3 tsy misy fanitarana. Manana izany tsy misy fanitarana aho, satria ny fomba tonga amiko ao amin'ny Fedora dia ny mametraka sy miasa, mametraka ny rindranasa ilaiko, ny codecs ary ny fijanonana feno. Tsy mila manamboatra saika na inona na inona aho, manova ny ambadika sy ny fijanonana feno aho. Teknista amin'ny rafitra aho, ary mazava ho azy fa miasa amin'ny antontan-taratasy, boky, virtualisation ary console, io no ampiasaiko matetika, ary tsy mieritreritra trauma izany, miasa tsara miaraka amin'izy ireo aho. Ny fiovana avy amin'ny Gnome 2 mankany Gnome 3 dia nahavoa ny maro, anisan'izany aho. Tadidiko fa nanandrana nanome azy fotoana maro aho tany am-piandohana, tamin'ny 2011, saingy marina fa tsy naharesy lahatra ahy io filozofia nentiny io. Izay no antony niverenako tany amin'ny KDE (izay efa nampiasako hatramin'ny 2010) fa misy zavatra tsy tiako. Fantatro ny tombony azony, ny herin'ny fampiharana azy, saingy amiko (tokoa, araka ny filazan'ny sasany azy etoana) fa ny olana amin'ny KDE dia izay mampiavaka azy manokana, ny fahefana anaovana azy manokana sy ny fampanjariany. Ataon'izy ireo ho rafitra somary malemy io, azo antoka fa tsy matanjaka kokoa noho ny GNOME. Mikasika ny fanjifana fahatsiarovana, miaraka amin'i Konqueror misokatra fotsiny, dia efa mandany 1,2 GB ny KDE. Ao amin'ny antsasaky ny Gnome sy Firefox. Avy eo dia ampanjifainao araka ny tadiavinao mandritra ny fotoana fohy ny KDE, saingy marina izany, indraindray dia toa manadino azy io ny fanaingoana sasany raha vao averinao indray ilay masinina. Ary mazava ho azy fa tsy misy ifandraisany amin'ny fampidirana tonga lafatra ireo tambajotra sosialy sy / na kaonty sy birao toa ilay ananan'i GNOME. Ity dia dingana lehibe amin'ity birao farany ity, izay kely fotsiny no voalaza: ny fampidirana tanteraka ny birao sy ny tamba-jotra izay ananan'i Gnome, ary ao anatin'ny segondra vitsy dia mahatonga ny rafitra hitantana sy handrindra ny antontan-taratasy, sary, fitehirizana, mailaka, tianao, fifandraisana sy kalandrie ary asa. Mahagaga. Ary nony farany, rehefa niverina tany amin'ny GNOME aho ary nahita ny tombony azo avy amin'izany, ny fiovana lojika kokoa noho ireo izay tonga tamin'ny fiandohan'ny sampany, sy ny paradigma tahaka izany, dia nijanona tao aminy aho. Ny iray mahatsapa fa tsy mila bara asa aho, antontan-taratasy, ahenao kely na ampitomboina, ny zavatra rehetra dia mifangaro tanteraka sy ao anatin'ny iray minitra, ary tsapako fa firafitra maro no hotehiriziko amin'ity tontolo ity. Efa nolazaiko hoe, paradigma amin'ny birao samihafa izy ireo, saingy mieritreritra aho fa raha ny loharanom-pahalalana, amin'izao fotoana izao, tsara kokoa ny Gnome, heveriko ihany koa fa matanjaka kokoa sy mifangaro kokoa izy io, ary mazava ho azy ny fampidirana atolotray amin'ny mailaka, kalandrie, Kaonty an-tserasera, avy eo no tsara indrindra hitako.
rava dia hoy izy:
Hitako fa tsara ny fampiasan'ny olona ity birao ity na hafa na toa tsy te hampiasa koa izy ireo. Raha misy mampiasa azy dia satria tiany izy ireo, heveriko fa tsy masiaka loatra ny olona ka mampiasa zavatra ankahalainy isan'andro. Izany dia nilaza fa izao dia esoriko ny hevitro ary azonao atao ny miteny, fa tsy ny fahatsapako ny hevitro rehefa mampiasa Gnome: Gnome no mampatahotra ahy, miteraka fihenjanana i Gnome. Ary izy rehetra dia noho ny fomba fikirakirany ny varavarankely sy ny tontonana. Angamba olana manahirana ahy manokana io, fa ny fijeriko fotsiny ny pikasary ny Gnome dia manome ahy bondrona gony ary misy cramp mihazakazaka midina amin'ny hazondamosiko.
Valio i distrozao
Eny, tena olanao manokana izany. Mirary soa amin'ny famakafakana.
alexishr dia hoy izy:
infumable! Aleoko ny biraon'ny vady
Mamaly an'i alexishr
Ignacio dia hoy izy:
Marina fa nanova ny fomba fampiasana be dia be izy ireo, ary misy olona avy nanandrana azy nifandona (ary tena mahery vaika) tamin'izay. Fa indray mandeha ianao mampiasa azy io dia manomboka tianao.
Ny olan'ny tsy fananana baoritra ohatra. Ao an-tranoko dia manana Gnome Shell sy windos7 aho any am-piasana, tsy azonao an-tsaina ny isan'ny fotoana hitako nanetsika ny totozy haingana teo an-jorony hanova fampiharana na hanokatra zavatra, ary nibanjina ny efijery very hevitra aho rehefa tsy nahazo. valiny. Toa hafahafa izany, fa rehefa zatra azy dia vao haingana kokoa ny mahita zavatra toy izany. Toy ny mijery ny bara fiasa xD
Amin'ny ankapobeny, ny zavatra tondroinao dia resaka tsiro, fa ny zavatra hifanarahako dia ny lohahevitra Nautilus-Dolphin. Tsy misy ifandraisany i Nautilus, notorotoroin'i Dolphin izy.
Mamaly an'i Ignacio
Toy izany koa no mitranga amiko. Tsy takatrao ny faingam-pandeha sy ny intuitive GNOME raha tsy rehefa "mifampiraharaha" amin'ny rafitra na tontolo iainana hafa. Niara-niasa tamin'ny W7 ihany koa aho nahita ny tenako imbetsaka naka ny pointer totozy ho amin'ny ankavia ambony, nanantena ny hahita ny zavatra misokatra, saingy tsia, tsy maintsy nitady sy nibolisatra tamin'ny baraingo aho.
Thaizir dia hoy izy:
Manao ahoana ny fihinanana ram? farany nampiasaiko gnome dia nitelina 1GB tsy misy fampiharana mandeha.
Valiny tamin'i Thaizir
gnome-shell, amin'ny ankapobeny ho ahy, dia mandany eo anelanelan'ny 70MB ka hatramin'ny 180MB, miaraka amin'ny fampiasana mihoatra ny herinandro. Mazava ho azy fa amin'ny PC misy RAM misy GB maromaro ity. Nojereko tamin'ny hafa voafetra kokoa izany ary ny fanjifany dia voafetra kokoa (eo anelanelan'ny 50MB), amin'ny fitsapana haingana.
Ny zavatra tena mandany RAM amin'ny PC mahazatra dia ny tranokala fitetezana tranonkala. Nahita Chrome hatramin'ny 3GB hampiasana aho. Angamba misy rindrambaiko mandefa miaraka amin'ny birao ary mandray izany fahatsiarovana izany.
Rehefa mamaky hevitra vitsivitsy aho dia mahatsapa fa misy olona tsy nanandrana ny Gnome Shell nandritra ny antsasak'adiny. Fiovan'ny paradigma somary tampoka io ary ny zavatra voalohany tokony hianaranao ny fampiasana azy, fa ny manaraka dia tianao ny iray na ny iray hafa dia tantara iray hafa.
Hitako fa misy ny olona mieritreritra fa raha miadana be izy na raha tsy miasa miaraka amina antontan-taratasy misokatra maro. Tsy marina tsotra izao, angamba tsy hitan'izy ireo ny fomba hanaovana izany ao amin'ny Gnome Shell, azoko atao ny manome toky anao fa ny zava-drehetra dia azon'ny hitsin-dàlana iray ary tsindry iray na roa farafaharatsiny (Matetika aho miasa amin'ny terminal 6 na 7 misokatra, 6 na mihoatra PDF, browser, mail client ary antontan-taratasy isan-karazany). Izaho manokana dia mampiasa sehatr'asa mavitrika handaminana ny karazana programa ary ampiasaiko mafy ny fanalahidy SUPER (Windows amin'ny ankamaroan'ny kitendry) hivezivezy eo anelanelan'izy ireo, misafidy windows na manokatra programa / fisie vaovao.
Ny fahasamihafana lehibe hitako eo amin'ny KDE sy Gnome Shell amin'ny filozofia famolavolana dia ny voalohany manana ny fitaovana misy rehetra ary azonao atao ny manafoana azy ireo na tsy mampiasa azy ireo ary ny faharoa dia manana ny fototra iasanao miasa ianao ary afaka manampy vaovao ianao fitaovana rehefa lasa ilaina.
Eny, mpamorona aho ary tsy tiako ny Gnome ... ho ahy ny mpanjakan'ny fahatsorana dia mbola xfce.
Misy tsipiriany amin'ny famolavolana sy ny fametrahana ny bokotra izay mahatonga ahy hihazakazaka avy any, angamba efa zatra Xubuntu XD loatra aho
Faustino Aguilar dia hoy izy:
Betsaka ny tontolon'ny birao sy izaho eto izay mampiasa Canonical's Unity 😐
Valiny tamin'i Faustino Aguilar
Jorgehms dia hoy izy:
Fanamarihana izay novakiako foana na taiza na taiza dia hoe Gnome dia miompana amin'ny takelaka fa tsy amin'ny birao ... Raha ny marina dia tsy marina 100% izany. Ao amin'ny Gnome dia mieritreritra momba ny birao manararaotra ny fahaizan'ny «touchscreen» izy ireo, na dia azoko aza fa mbola tsy 100% (tsy hita ny fifindra-monina mankany Wayland). Saingy miasa tsara ho an'ny solosaina finday na birao amin'ny alàlan'ny kitendry. Amin'ireo birao rehetra nampiasako dia ny Gnome no "friendly keyboard" indrindra, izay mora kokoa ny manokatra rindranasa (Super + application application + miditra), mifamadika aps, manova desktops, mamaly haingana ireo hafatra, sns. Tombony lehibe izany fa vitsy ny maneho hevitra
Mamaly an'i Jorgehms
edgar hdz dia hoy izy:
GNOME! Hatramin'ny nahaterahany ……
Valio i edgar hdz
Roman dia hoy izy:
Salama, zavatra efa nampiasako hatrizay, dia tsy ao amin'ny GNOME 3.16 intsony.
Zavatra tsotra toy ny hoe afaka "mampifandray folder na fisie" avy amin'ny FILES !!!
Manana ny fizarazaranay foana aho:
/ data (toerana avelako ny sariko rehetra, ny horonantsary sns)
Noho izany, mamorona rohy fampirimana ao an-tranoko mankany / data / Documents foana aho (ohatra).
Eny, lasa io safidy fototra io!
Mba hamahana izany banga izany dia tsy maintsy niditra tao amin'ny tranoko Debian hafa aho (Debian) ary "kopia" ireo rohy noforonina teo aloha, amin'izay no fomba fiasa.
Valiny tamin'i Roman
DanielrHat dia hoy izy:
Ny safidy hamoronana rohy dia mijanona fotsiny, tsy maintsy sintominao fotsiny ilay fampirimana na fisie miaraka amin'ny bokotra afovoany ary alatsaho amin'izay tianao ny rohy (azo atao miaraka amina rakitra sy lahatahiry maromaro)
ps: rehefa misy zavatra tsy vitan'ny interface graphique dia misy foana ny safidy hafa amin'ny fanaovana azy amin'ny terminal, amin'ity tranga ity dia:
ln -s / data / antontan-taratasy $ HOME / Documents /
amin'ity fomba ity dia ho voatahiry ao amin'ny fizarazaran-drakitra ny zava-drehetra ao amin'ny folder Documents.
Valiny tamin'i DanielrHat
jorss dia hoy izy:
Raha te-hamongotra kapila USB isika nefa tsy mila manokatra nautilus (fisie) dia mamindra ny pointer totozy fotsiny ho eo ambanin'ny efijery (na aiza na aiza eto ambany) mandritra ny segondra ary hiseho ilay bara fampandrenesana, dia misafidy ny kapila USB fotsiny isika ary manindry ilay fidinana bokotra ary dia izay
Mamaly an'i jorss
Raha ny fahitako azy dia mahatratra izay voakasik'izany filozofia izany izy ireo. Ary tiako izany satria tsy maoderina na lamaody fotsiny io. Ny interfaces kely indrindra dia tsara tarehy nefa mety hidika koa hoe kely kokoa amin'ny enta-mavesatra amin'ny processeur.
Azonao atao ny mamaritra ny hatsaranao amin'i Gnome amin'ny teny roa: minimalist sy practical.
Miankina amin'ny fanitarana tianao ampiana koa ny maha-azo ampiharina azy.
Tsy mangataka mihoatra noho izay atolotry ity tontolo ity aho. Raha mpankafy effets sary na customization avo lenta aho, dia tsy Gnome no tontolo malalako.
Legiona dia hoy izy:
Maro ny hevitra nakana tahaka ny akorandriaka
Valiny ho an'i Legiona
EasyEDA PCB famolavolana ao anatin'ny minitra vitsy monja
Fandrefesana ny hafainganam-pandeha HDD miaraka amin'ny dd